Akụkọ ụlọ ọrụ - Qingdao Sino Witop Steel Co., Ltd.
Mmetụta nke "Mbelata Carbon" na Ngwaahịa
N'agbanyeghi oke okpomoku zuru ụwa ọnụ na mmetụta na -esiwanye ike nke griin haus, China, dị ka ụlọ nrụpụta akụ na ụba yana kwa ụlọ ọrụ ụwa, egosipụtala mkpebi siri ike ya ịgbaso ụzọ nke mmepe akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ.
Gọọmentị China na -atụle ịtụ ụtụ tarifụ na mbupụ ọkụ na August 15
Mbupụ ngwaahịa ngwaahịa nchara na July bụ 5.669 nde tọn, mmụba afọ-afọ nke 35.8%.
Ọnụ ahịa igwe anaghị agba nchara na China na -agbada
Ọnụ ahịa nke igwe igwe na-emepụta n'ime ụlọ na mpaghara ndị na-egwupụta akụ na mpaghara China gbadara karịa na July 26-30, dị ka nyocha oge niile.
Ụtụ ụtụ mbupụ China nchara adịghị anya atụmanya ahịa
Nkwupụta China na July 29 ịkagbu nkwụghachi ụtụ nke mbupụ na ngwaahịa nchara 23 yana ịkwalite ụtụ mbupụ na igwe ezi dị ọcha na ferrochrome, ha niile na-arụ ọrụ na Ọgọst 1, n'agbanyeghị na ọnwa atọ ka agbazigharị ikpeazụ gasịrị, pụtara. ezughi oke na isi ahịa, ọtụtụ n'ime ha ka na -elekwa anya ma a g......
Rio Tinto na -arụkọ ọrụ na ndị na -ebubata ihe na China na ọrụ mmezi ọdụ ụgbọ mmiri Lambert
Dị ka akụkọ gọọmentị Rio Tinto si kwuo, Shanghai Construction Engineering Group na Jiangsu Yangzi Chengkang Marine Equipment Co., Ltd. nyere nkwado siri ike maka ọrụ nrụzigharị nke Port Lambert na Western Australia, wee nyefee ihe karịrị tọn 7,000 nke ikpo ọkpọ na 20 bollard steel Structural modul.
Ndị isi atọ nke igwe nchara atọ wepụtara akụkọ arụmọrụ mmepụta nkeji nke abụọ
Nkwupụta arụmọrụ nke afọ mmefu ego nke BHP Billiton nke 2021 na-egosi na arụpụta ígwè na 2021 bụ nde tọn 253.5, mmụba nke 2% kwa afọ.